Delete Duplicate Music Albums paMac neDuplicate Music Cleaner | Ndinobva mac
La Dzokorora App Music achangotanga paMac App Store uye anopa mushandisi nzira nyowani yekubvisa duplicate mumhanzi pakombuta. Ichi chishandiso chitsva chinogona kubatsira zvakanyanya kune avo vane rakakura raibhurari yemumhanzi paMac hard drive.
Zviripachena kuti hazvizodzime chero chinhu pasina kupihwa mvumo mushandisi uye nekudaro hatizombove nedambudziko pakubvisa mafaera, ingoita ongororo yedisiki uye wobva wasarudza iwo mafaera. kana tangodzokororwa tinogona kuenderera kumhedzisiro.
Imwezve sarudzo kune avo vane zviuru zvemimhanzi paMac
Uye ndezvekuti kuburitsa kana kushambadzira masevhisi emimhanzi asati asvika, vashandisi vakachengeta mimhanzi yese pamidziyo yedu, kunyangwe nanhasi kune vashandisi vanofarira zvimwe kutenga madhisiki pamhepo uye vova nawo pasina kukosha kwekubatana kunetwork. Chero zvazvingaitika izvo vashandisi vane akawanda emimhanzi mafaera paMac uye ivo vanotenda kuti vanogona kunge vaine zvakapetwa, iyi Anwendung inogona kuva yakanaka kwazvo sarudzo kwavari.
Icho chishandiso chiri nyore uye chinoita scan uchishandisa algorithm iyo inoseta nemazita akasiyana emimhanzi faira mafomati atinawo nhasi. Izvo zviri nyore uye zvichatibatsira kudzoreredza nzvimbo yezvimwe zvinhu pane yedu hard drive. Duplicate Music Cleaner Iyo ine mutengo we2,29 euros Asi kana yangotengwa, hazvizobvunze kuita zvimwe zvakabatanidzwa kutenga kana zvakafanana, isu tinotenga iyo yese app.
Duplicate Music Cleanervakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Delete duplicate mumhanzi maalbub paMac neDuplicate Music Cleaner
Zvitsva zvinogadziriswa kuAdobe XD uye Lightroom CC ine zvakawanda zvakagadziridzwa